တောင်းတဲ့ဆုလေးတစ်ခု | YANGON LITERARY MAGAZINE
Posted on June 27, 2016 by Kcmmaung	Leaveacomment
Words by Waine Waine
အနံ့ဆိုးတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ကျွန်မကိုမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်မဘ၀က ဆိုးရွားတဲ့ကံတွေနဲ့ဘ၀စခဲ့ရသူပါ။ကျွန်မကိုမွေးမွေးပြီးချင်းမကြာပါဘူး….မေမေရဲ့အော်သံကိုကြားနေရတယ်…လူတစ်ယောက်က ကျွန်မတို့မောင်နှမ ၃ ယောက်ကိုဆွဲခေါ်သွားလို့လေ။ မွေးကင်းစ ကျွန်မ ကြောက်နေရမှာလား။မေမေ့အသံနက်ကြီးကိုကြားနေရတော့ကျွန်မစိတ်မကောင်းမိဘူးလေ။ ခဏကြာတော့ ကျွန်မတွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်း အသက်တစ်နာရီတောင် မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်မြင်ကွင်း… ကျွန်မ ညီမလေးကို ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းကို ဖြတ်နေတာပါလား။
ကြောက်ပြီးတုန်နေတဲ့ ကျွန်မ မေ့မေ့ကိုလှမ်းကြည့်တော့လဲ သံတိုင်တွေ ကြားက မေမေ မျက်ရည်တွေကျနေတာပါလား။ မေမေ သူ့ရင်သွေးလေးတွေနာကျင်မူကိုသူမကယ်တင်နိုင်လို့ကြည့်ပြီး နာကျင်နေရရှာတာပဲ။မေမေ့ကိုမုန်းချင်တယ်။ဒီဘ၀ ကြီးထဲကိုခေါ်လာလို့လေ။ ညီမလေးလိုပဲ ကျွန်မရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတချို့ကိုသူတို့ ဖြတ်တောက်ကြတယ်။
မွေးခင်းစ ကျွန်မ နာကျင်တာ ပြောပြမတတ်ပါပဲ။ ညကြတော့ မေ့မေ့အခန်းငယ်လေးထဲမှာပဲ ကျွန်မတို့မောင်နှမ ၃ယောက်မေမေရင်ခွင်ထဲမှာတိုးလို့အိပ်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်မ မောင်လေးက တော့အနာရှိန်ကြောင့်ဖျားနာနေရှာတယ်။ ကျွန်မတို့မေ့မေ့ရင်ခွင်ထဲမှာပျော်နေချိန် ညီမလေးကို လူနှစ်ယောက်လာခေါ်ကြတယ်လေ။ ဘေးအခန်းက အန်တီကြီးပြောတာတော့ မြေမနင်းသားဆိုလား။ တခါတလေ မှလာခေါ်ကြတာပါတဲ့။ ညီမလေးကံကောင်းသွားတာလား။မြေမနင်းသားဆိုတာဘာလဲ ကျွန်မမသိပါ။သိလဲမသိချင်တော့ပါ။ ကျွန်မအနာရှိန်ကြောင့်အဲ့ည အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်လေ။
မနက်ရောက်တော့ မောင်လေး ကမသက်သာ ဘူးလို့ပြောသံကြားတယ်။ မနေ့ကလူနှစ်ယောက်က ရောက်လာပြန်ပြီ…သူတို့မောင်လေး ကိုဘာလုပ်ကြအုန်းမှာလဲ။ကျွန်မ မေးခွန်းတွေထဲမှာအဖြေရှာနေတုန်း မောင်လေး အခြေအနေကို ကြည့်ပြီးကျွန်မ တို့ရှေ့မှာပဲ မောင်လေးကိုရိုက်သတ်လိုက်တယ်…
ကျွန်မ၁လသားအရွယ်ရောက်တော့မေမေဆီကနေခွဲခွာပြီးအခန်းကျဉ်းလေးထဲကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မ ဘ၀နေ့ရက်တိုင်းက အပြစ်မရှိပါပဲအကျဉ်းကျနေရသူပါ။ကျွန်မမှာ သက်ရှိတို့သဘာဝ အိမ်မက်ဆိုတာ ရှိတာပေါ့။ ကျွန်မ မြက်ခင်းစိမ်းကြီး ကိုတစ်ခါလောက်မြင်ဖူးချင်သေးတယ်။ ကျွန်မ အိမ်မက်ကို ရယ်စရာတခုလို့တွေးထင်ကြမှာပါလေ။ အကြီးကြီးမဟုတ်တဲ့ ကျွန်မ အိပ်မက်လေးတောင် ပြည့်ပါ့မလားမသိဘဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာပါ။
ကျွန်မ အရွယ်ရောက်လာတော့ ကျွန်မကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အရွယ်မို့သူတို့ စီစဉ်နေကြတယ်လေ။ကျွန်မ ဆန္ဒမပါပဲ ကျွန်မ အလိုမတူပါပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်မ အဖေဆိုတာ ဘယ်သူမှန်းမသိရခဲ့သလို့ကျွန်မ ခင်ပွန်းကိုပင် ဖြူသလား၊ မဲသလား ကျွန်မ မသိခဲ့ရပြန်ဘူးလေ။
ကျွန်မ ကိုယ်ဝန်လစေ့ပြီလေ..ကျွန်မ သားသမီးတွေကို မြင်ရတော့မယ်။ အမေတစ်ယာက်ပီတိ အပျော်တွေနဲ့ပေါ့။ကျွန်မကလေးမီးဖွားဖို့ အခန်းတစ်ခုထဲခေါ်သွားတယ်။ မယုံကြည်နိုင်အောင် မျက်စိတွေပဲမှားနေတာလား။ကျွန်မ ဒီဘ၀ ထဲကိုစရောက်စဉ်ကအခန်းကြီးပဲ။ကျွန်မ ပျော်လဲပျော်တယ် သေလဲသေချင်တယ်။ကျွန်မ ကလေးတွေကော ကျွန်မကြုံခဲ့ရသလို ခံစားရတော့မှာလေ။ မေမေ့ ခံစားချက်ကိုသမီး ခုနားလည်ပြီ။ကလေးတွေရဲ့နာကျင်မှုလို့အော်တဲ့အသံက ကျွန်မ နှလုံးသားကို ကွဲအက်စေတယ်။ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲထွက်တော့မယ့် ကျွန်မ၀မ်းနည်းနေရုံက လွဲပြီး ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။
ကျွန်မ ကလေးမွေးပြီး၂လကြာတော့ဖျားနာလာတယ်။ ကုလို့မပျောက်တော့ သခင်လို့ခေါ်တဲ့လူက ကျွန်မကို အချိန်တန်ပြီလို့ပြောတယ်။ မကြာပါဘူး…ကျွန်မကို တုတ်နှောင်ပြီး အခန်းငယ်လေးထဲက ဆွဲထုတ်ကြတယ်။ ကားပေါ်တင်ကြတယ်။ကားပေါ်မှာလဲ ကျွန်မလို ပုံစံတွေပါပဲလား။ကားပေါ်မှာ ပြည့်သိပ်ကြပ်လို့ တိုးဝေ့နေကြတော့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးကိုကိုက်ခဲနေတာပဲ။ ကားစထွက်တော့ လမ်းမှာတွေ့သမျှလူတွေကို အော်ပြီး အကူအညီတောင်း ကြည့်တယ်။ မကြားကြတာလား။ မသိကြတာလား။ မမြင်ကြတာလား။ ခုတော့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး မက်ခဲ့တဲ့ အိမ်မက်ထက် ရေတစ်ပေါက်လောက် သောက်ရရင်ကို ၀မ်းသာမိမှာပါ။ ကျွန်မ လမ်းတစ်လျှောက် မမြင်ဘူးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုငေးမြောကြည့် နေပေမယ့် မပျော်ပါဘူး။
ကျွန်မ သွားနေတာ ကျွန်မသေဆုံးရမယ့်နေရာလေ။ ပျော်နိုင်ပါ့မလား။ သက်တန်းစေ့ နေချင်သေးတယ်။ ကျွန်မဘ၀ အချုပ်ခန်းထဲမှာပြီးဆုံးရလဲ ကျွန်မ သက်တန်းပြည့် နေချင်သေးတယ်။ကျွန်မအသွေးအသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သက်ရှိပါ။ ကျွန်မ ခေါင်းကိုထုရိုက်ပြီး သတ်ဖြတ်ဖို့မပြောနဲ့။ ကျွန်မကို ဖွဖွလေးရိုက်တောင် နာကျင်တတ်ပါတယ်။ ခုတော့…ကျွန်မ မလုပ်တဲ့ အပြစ်တစ်ခုအတွက် သေမိန့်ကျနေပါပြီ။ လူသားတွေလို ကျွန်မ ပျော်တတ်တယ်။ နာကျင်တတ်တယ်။ ကြောက်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ မွေးဖွားလာတာက ကျွန်မ ဘ၀ အတွက်မဟုတ်ဘဲ လူသားတွေဘ၀ အတွက်ပါပဲလား။ ကျွန်မ အသားကို စားသုံးဖို့ ပျော်နေကြပြီလား။ ကျွန်မ ကြောက်ရွံ့လို့ ငိုကြွေးတာကိုကော မတွေ့ကြတော့ဘူးလား။ မွေးခင်းစထဲက အမြီးဖြတ် ခံခဲ့ရတဲ့ နာကျင်မူတွေနဲ့ စခဲ့ရတဲ့ဘ၀ထဲမှာ လူသားတွေက ကျွန်မပျော်တယ်ထင်နေကြတာလား။
ကျွန်မ အလိုမတူပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပေးခဲ့ရတာကော မုဒိန်းမှု မမြောက်ဘူးလား။ကျွန်မမှာ နာမည်ရယ်လို့လဲ မရှိခဲ့ ရပါဘူး။လူတွေကတော့ ၀က် လို့ခေါ်ကြတာပဲ။ ကျွန်မ လူစကားမတတ်သလို လူတွေကလဲ ကျွန်မပြောနေတာကို နားလည်ကြမယ်မထင်ပါဘူး။ တစ်ခါလောက် ကျွန်မ မက်ခဲ့တဲ့ မြက်ခင်းစိမ်းလေး ကို၅မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် တွေ့ခွင့် ရမယ်ဆို ရှင်သန်ခဲ့ ရတဲ့ သက်တမ်း ၁နှစ်ကျော် တစ်လျှောက်မှာ ပျော်စရာ ဆိုပြီးအမှတ်တရသယ်သွားချင်လို့ပါ။ ကျွန်မ မွေးဖွားကတည်းက ခုသားသတ်ရုံထဲ ရောက်တဲ့ထိ ကျွန်မလူသားတွေအပေါ်အမှားတစ်စုံတစ်ရာ မလုပ်ခဲ့မိဘူးလေ။ ကျွန်မ တို့တွေကို သခင်တို့ အိမ်မွေးခွေးလေးတွေ ကြောင်လေးတွေလို ချစ်ကြည့်ကြပါလား။ကျွန်မတို့လဲ သခင်ကိုအပေါ် သိတတ်ကြပါတယ်။ချစ်တတ်ကြပါတယ်။၁နှစ်သာသာ ပဲရှိသေးတဲ့ ကျွန်မကိုတောင်းတဲ့ဆုပြောပါဆို ကျွန်မကိုရှင်သန်ခွင့်လေး ပေးပါတောင်းဆိုချင်ပါတယ်…….။ ကျွန်မ အသက်ရှင်ချင်သေးတယ်။ သက်တန်းစေ့နေချင်သေးတယ်။
Tags: animal, cruelty, fiction, myanmar, people, writing. Bookmark the permalink.
Previous post ← The Look
Next post In Depth with Nature →